Iithoyi 'R' Iifayile zethu zokungabinamali | Ezezimali
Iinto zokudlala 'R' Iifayile zethu zokungabinamali
UJoseph kwakhona | | iinkampani
Hayi kuba bekulindelwe, iindaba ziye zatsala ingqalelo encinci. Inyani yile yokuba sele iqinisekisiwe ukuba inkampani yokudlala uza kufaka ifayile yomthetho wokungabinamali evela eUnited States. Ukunikwa ubunzima obukhulu kwityala lakhe, kodwa kukwakhuthazwa ziingxaki ezibalulekileyo kumgca wakhe weshishini kwaye oko kuye kwakhokelela ekubeni avelise ezinye Iziphumo zeshishini ngaphantsi koqikelelo lwaseburhulumenteni. Esinye sezizathu zokuqonda le meko kungenxa yomzuzu icandelo lokudlala elihamba ngalo ebusweni bamandla wentengiso ye-Intanethi engayekanga ukukhula kule minyaka idlulileyo.
Ezi ndaba zijoyina iingxaki ezenziwa ngumenzi wokudlala waseDenmark uLego naye ahamba nazo. Ukuza kuthi ga kwinqanaba lokuntywiliselwa kwingxaki yamashishini amancinci ekhokelele ekuchazeni ngokutsha inxenye yabasebenzi. Inyani ebonisa umzuzu obuthathaka ofunyanwa lishishini lezinto zokudlala kwinqanaba lehlabathi. Ngeziphumo zeshishini ezazingonelisi kwimidla yabo. Ukongeza, kwezinye iinkampani ezincinci zezi mpawu zinengxaki yemfuno esezantsi. Inxalenye ethathwe ekubonakalisweni kweethoyi kwifomathi ekwi-intanethi.
Ewe, imeko yangoku yeeToyi inokubonwa kwangaphambili emva kwesigqibo kwiinyanga ezimbalwa ezidlulileyo zevenkile yayo engumfuziselo kwenye yezona ndawo zichaphazelekayo eNew York. Emva kokuvuleleka eluntwini ngaphezulu kweminyaka elishumi elinesihlanu. Ayimangalisi into yokuba ngelo xesha amanye amajelo osasazo akhethekileyo alumkisa ngemeko yezoqoqosho yenye yeempawu zevenkile yokudlala emhlabeni, njengoko kwenzekile ngalo mzuzu. Ngetyala elikufutshane ne-5.000 yezigidi zeedola Kwaye ugqibile ngale meko kwezemali.
1 Izinto zokudlala kwiliso lenkanyamba
2 Iivenkile zakho zisebenza ngesiqhelo
3 Kuza kwenzeka ntoni ngoku?
4 Ikamva lenkampani yokudlala
5 Ivenkile ziya kuqhubeka nokusebenza
Izinto zokudlala kwiliso lenkanyamba
Enye yezinto ekufuneka ziqwalaselwe ngeli xesha kukuba iithoyi ayidweliswanga kwiimarike zezabelo Ukusukela nakweliphi ilizwe. Ke eli nyathelo alinakuba nasiphumo kubatyali mali. Ukuba ungomnye waba bantu, kuya kufuneka uyazi ukuba intengiso yevenkile yokudlala yayingenandlela yimbi ngaphandle kokushiya imarike yemasheya kwiminyaka elishumi eyadlulayo. Ngale ndlela, qala uhlengahlengiso olunzima kwiiakhawunti zakho zeshishini. Emva kokuhla kwamaxabiso abo kwiimarike zezemali kunye nokukhokelela kusiko olubaluleke kakhulu kwizabelo zabo. Ngale ndlela, abagcini ababethathe izikhundla kweli xabiso kwakufuneka baphulukane nelahleko enkulu kulondolozo lwabo.
Le yinto ayizukwenzeka ngophuliso lweeToys ngoku. Akumangalisi ukuba kungadweliswanga kuyo nayiphi na intengiso yemali. Hayi nakwesesekondari, ngenxa yoko imeko yangoku ayizukuchaphazela icandelo lotyalo-mali. Nangona ngokuchaseneyo, kunokuba nefuthe kwiinkampani ezikwicandelo elinye. Nangona kunjalo, eSpain akukho nanye kwezi mpawu. Kuya kufuneka uye kwiimarike zaseMelika, eGreat Britain okanye eJamani ukuze udibane neenkampani ezidwelisiweyo ezinezazisi. Uninzi lwazo ludibene neminye imigca yeshishini kwaye luyabavumela ukuba bahlule iiakhawunti zabo zeshishini.
Iivenkile zakho zisebenza ngesiqhelo
Eli nyathelo libalulekileyo lezoqoqosho ngooToyisi okwangoku alichaphazeli iivenkile elinazo kuyo yonke iJografi yaseSpain. Njengokuphela kwayo Amaziko ayi-1.600 kwihlabathi liphela. Ngaphandle kokufumana nasiphi na isiphumo sokubhengezwa njengongenamali. Ngale ndlela, abasebenzisi abanqwenela ukuthenga iimveliso zakho baya kuba nakho ukwenza njalo ngaphambili. Ngokuqheleka ngokupheleleyo ekunikezelweni kweenkonzo zayo kunye noluhlu olufanayo lweemveliso ezilungiselelwe uninzi loluntu olusebusaneni.
Ngokukodwa, inkampani yokudlala ibonelela eSpain inethiwekhi ye Amaziko angama-51 kwaye i-1.600 iyonke yabasebenzi abathi, njengoko benyanzelisa olu phawu lwentengiso, abangazukuchaphazeleka ekuqaleni yile nkqubo yeshishini. Isiqwenga seendaba esijoyina abanye kwicandelo elingabonisi ukuba kuhamba elona xesha lilungileyo. Ngokhuphiswano kwimigca yeshishini ebengekho kwiminyaka edlulileyo. Okumangalisayo kukuba, yile nkampani, iithoyi, evuse ulindelo olukhulu phakathi kwabathengi ngesibonelelo esitsha sezinto zayo zokudlala. Ukuza kuthi ga kwinqanaba lokuba impendulo yabo ibonakale ikhuthaza ukusekwa kwalo kraca kwijografi yesizwe.
Kuza kwenzeka ntoni ngoku?
Emva kokuba imeko yokubhengezwa njengongenamali ibhengeziwe, maninzi amanyathelo ekuza kufuneka athathwe kule nkqubo inzima yolawulo ukusukela ngoku. Ukuqala, kufuneka bathathe intlawulo esondeleyo itotali 400 iidola ezigidi. Okanye yintoni efanayo, i-334 yezigidi ze-euro. Esi sesinye sezona zizathu zibalulekileyo zokuba kutheni esi sigqibo sibalulekileyo siye sachithwa. Ukuba kwimeko yezemali enqongopheleyo eyabathintela ekwenzeni naluphi na uhlobo lokuhamba ukulungisa ingxaki yabo yokunqongophala kwemali.
Ngale ndlela, kunye namanyathelo athathiweyo kule veki, iithoyi zikwisimo sokuhlaziya ityala lazo ngokuzolileyo. Ukuza kuthi ga kwinqanaba lokuba unokuthenga ngakumbi iimveliso kunye nokuxhasa imisebenzi yakho yeshishini. Esi sesinye sezizathu zokuba umgca weshishini lakho uphile kwixesha elizayo. Kwaye oko kuxhasa isigqibo musa ukuvala uninzi lweevenkile zalo. Umzekelo, iyenzeka neevenkile zayo eSpain. Ukusuka kolu luvo, asinakuthetha ngemeko yesiphelo njengoko kunokuba kunjalo ekuqaleni.
Ikamva lenkampani yokudlala
Nokuba yeyiphi na indlela, injongo yeenkokheli zayo kukuqhubeka phambili neshishini. Kuba sele beqhubele phambili kwiinjongo zabo zokuqhubeka nokusebenza nabatyalwayo ukuze bahlengahlengise ityala lexesha elide. Inyathelo lokuqala ekufuneka belithathile kukufikelela kule meko yokuchaphazeleka. Ngenjongo yokuba banokusombulula ezi ngxaki kwi-accounting yabo kwaye bangaqhubeka nomsebenzi wabo nangaliphi na ixesha. Konke oku ngaphandle kwempembelelo ebangelwe zezi ndaba kwishishini. Ngokukodwa kwicandelo lezinto zokudlala kunye nezinto zokuzonwabisa ezijolise kwicandelo labemi abancinci.
Ngokuchanekileyo ngexesha apho iinkampani kwelinye icala leAtlantic zinexesha elihle. Apho ubukhulu becala izibonelelo zonyuka ngekota. Ukunika amaphiko kwizabelo ze-US ukufuna imbuyekezo engcono kwizabelo zeenkampani ezidwelisiweyo. Apho imeko ekhethekileyo yeToys ibonakala iyimeko eyodwa ngokubhekisele kwimigca ephambili yeshishini kweli lizwe.
Ivenkile ziya kuqhubeka nokusebenza
Kuyo nayiphi na imeko, kufuneka uyazi ukuba izibonelelo ezingagutyungelwanga ngulo msebenzi ziya kuqhubeka nokusebenza njengesiqhelo. Apho uninzi lwazo, ngokoluvo lwabalawuli beethoyi, zinenzuzo kwaye zinika izibonelelo kwinkampani. Ayothusi into yokuba ingxaki ayibangelwa kukuba ishishini lihamba kakubi kakhulu. Kodwa ngokuchaseneyo, unobangela kufuneka ufunwe kwityala elikhulu kangangokuba libe neziphumo ze Ukwandiswa kweshishini kwinxalenye elungileyo yamazwe abaluleke kakhulu kwihlabathi.
Enye into ekufuneka ithathelwe ingqalelo kule nkqubo kukuba ukuba ubuluhlu lwezabelo zakho kwiimarike zezabelo izinto bezinokutshintsha kakhulu. Ngengqiqo yokuba le nyani yayiya kuvakalelwa kwixabiso lokhuseleko. Ngokwehla okubonakalayo ngaphezu kwezabelo zayo. Nokuba kubangela isiphithiphithi ngabatyali mali. Into eyayinokuyenza mandundu imeko kuba ifunyanwa sesinye sezona zinto zibhekisa kuzo kwimizi-mveliso yokudlala. Ukusuka kule meko, abasebenzisi beemarike zentengiso akufuneki bakhathazeke malunga nefuthe lesibambiso esinokuthi siveliswe ukusukela ngoku.
Ngaphandle kwempembelelo yezi ndaba kumajelo eendaba, okwenzekileyo kwiithoyi akukho nto intsha. Endaweni yokuba yenzeke kwinxalenye yeenkampani ezikwimeko efanayo. Zimbalwa izinto ezinqabileyo kwimilinganiselo bathatha kule veki inzima. Iziganeko zayo ezinkulu zinento yokwenza nokuthandwa kweshishini. Ukongeza, ukubakho kwiindawo ezininzi zehlabathi, njengakumzekelo wentengiso yaseSpain uqobo.
Apho, enye yezona zinto zibalulekileyo kukuba inkampani yaseMelika ifumene ukuzibophelela kwezemali ngaphezulu kwe-3.000 yezigidi zeedola liqela elidibeneyo leebhanki elikhokelwa nguJP Morgan kunye nabanye ababolekisi ukuze bakwazi ukuhlawula abathengisi bayo, njengoko ingxelo yenkampani uqobo . Kukwafanelekile ukuba uqaphele ukuba ukusebenza ngaphandle kwe-United States kwahlukile kwaye ke ayiyonxalenye yenkqubo yokubhengezwa. phantsi kweliso lezomthetho. Ngamanye amagama, abathengi baseSpain baya kuba nakho ukuqhubeka nokufumana iimveliso zolu hlobo lwentengiso njengangaphambili. Ngaphandle kwayo nayiphi na into ebonakalayo kumgangatho wenkonzo abayinikelayo kuwo onke amaziko abo orhwebo.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ezezimali » ishishini » iinkampani » Iinto zokudlala 'R' Iifayile zethu zokungabinamali
Izitshixo ezi-6 zokwahlula ngokuchanekileyo utyalomali
Ukubheja kwimarike yemasheya okuneziqholo kakhulu ekwindla